တုံးအတဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမကို အသာစီးရချင်တယ် ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမအပေါ် သဘောထားကြီး အလျှော့ပေးတတ်တယ်…! – Pwintsan
တုံးအတဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမကို အသာစီးရချင်တယ် ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမအပေါ် သဘောထားကြီး အလျှော့ပေးတတ်တယ်…!
တုံးအတဲ့ ယောက်ျားနဲ့ ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားတုံးအတဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမကို အသာစီးရချင်တယ်…ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမအပေါ် သဘောထားကြီး အလျှော့ပေးတတ်တယ်…တုံးအတဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမရဲ့အားနည်းချက်တွေကို မြင်တိုင်း စိတ်ပျက်လွယ်တယ်။ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမရဲ့ အရည်အချင်းကို ရှာကြံ အသိအမှတ်ပြု ချီးမွမ်းတတ်တယ်…တုံးအတဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမနဲ့ အချိန်နေရာ မခွဲဘဲ ငြင်းခုံ ရန်ဖြစ်တယ်။
လူပုံအလယ်မှာ မိန်းမကို မျက်နှာသာ မဲ့စေ တယ်…ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားကလူပုံအလယ်မှာ မိန်းမကို မျက်နှာသာ ရစေတယ်…ဆုံးမ ပြောဆိုစရာရှိရင် နှစ်ကိုယ်ကြားသာ ပြောဆိုတယ်။တုံးအတဲ့ ယောက်ျားက မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းတွေက
“မယားကြောက်” လို့ ခနဲ့တာကိုမခံနိုင်ဘဲ မိန်းမအပေါ်နိုင်စားပြ ချင်တယ်…ကိုယ့်ဘဝ လက်တွဲဖော်ဟာကိုယ့်မိန်းမသာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သူမေ့နေလို့ ဖြစ်မယ်။ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားကတော့ အပေါင်းအသင်းတွေက ခနဲ့ရင်တောင် ဂရုမစိုက်ဘဲယုယမြဲ ယုယတယ်…ကိုယ့်ဘဝအတွက် ဆိုးတူကောင်းဖက်ဟာ ကိုယ့်မိန်းမဘဲလို့သူနားလည်လို့ ဖြစ်တယ်။
တုံးအတဲ့ ယောက်ျားကမိန်းမရဲ့အတိတ်ဟောင်းကို ခဏခဏ တူးဆွပြီး ပြဿနာ ရှာတယ်…ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့အနာဂတ် ဖန်တီးဖို့ပဲ ကြိုးစားတယ်…တုံးအတဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမရဲ့အမှားကို အသေ ဆုပ်ကိုင်ပြီး နိုင်ကွက်အဖြစ် အသုံးချတယ်…ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမရဲ့အမှားကို ခွင့်လွှတ်ပြီး
မေတ္တာနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားတယ်။တုံးအတဲ့ ယောက်ျားက “နင်ထွက်သွား မသွားရင် ငါသွားမယ်” လို့ဆိုတယ်…ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားက”ငါတို့ ဘယ်တော့မှ ဘာ အကြောင်းနဲ့မှ မခွဲကြဘူး”လို့ ဆိုတယ်။
တုံးအတဲ့ယောက်ျားကမိန်းမကို သဝန်တို ချုပ်ချယ်တယ်…ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမကို ယုံကြည်မှု ပေးပြီး ချစ်မေတ္တာနဲ့ စိတ်အေးလက်အေး ချည်နှောင်ထားတယ်။တုံးအတဲ့ ယောက်ျားကကိုယ်တော်ကိုယ်တတ်ကြောင်းသာ
ဦးစားပေး အလေးထားတယ်…ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမဆီက ကိုယ် မသိသေးတာတွေကို လေ့လာသင်ယူတယ်။တုံးအတဲ့ ယောက်ျားကမိန်းမ ကိုယ့်အနားက တစ်ဖဝါးမှ မခွာရင် စိတ်ကျဉ်းကျပ် မောင်းထုတ် တယ်…ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားက ဘုရားသွား ကျောင်းတက် တူစုံမောင်နှံ တတွဲတွဲ သွားလာရတာကို ပီတိဖြစ်တတ် ….ဂုဏ်ယူတတ်တယ်။
တုံးအတဲ့ ယောက်ျားက စီးပွားသာ ရှာပြီး မိန်းမအပေါ် ယုယကြင်နာမှု ပေးရမှာ ပျင်းတယ် အပိုအလုပ်လို့ ယူဆတယ်…ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားက စီးပွားလဲ ရှာတယ် မိန်းမအပေါ် ယုယကြင်နာမှု ပေးတယ်။တုံးအတဲ့ ယောက်ျားကမိန်းမကို
စိုးရိမ် ပူပန်မှုနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှု တွေပေးတယ်…ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားက မိန်းမကို စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို ပေးတယ်။တုံးအတဲ့ ယောက်ျားက သူ့ရဲ့ဇာတ်ရှုပ်တွေဖောက်ပြန်မှုတွေနဲ့ မိန်းမကို မျက်ရည် ကျစေတယ်…ထက်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားက အောင်မြင်တဲ့ မိသားစု ဘဝကို တည်ဆောက်ပြီး မိန်းမကို ပြုံးရယ်စေတယ်…
Credit : မူရင်းရေးသူ
တုံးအတဲ့ ယောကျြားက မိနျးမကို အသာစီးရခငျြတယျ ထကျမွတျတဲ့ ယောကျြားက မိနျးမအပျေါ သဘောထားကွီး အလြှော့ပေးတတျတယျ…!
တုံးအတဲ့ ယောကျြားနဲ့ ထကျမွတျတဲ့ ယောကျြားတုံးအတဲ့ ယောကျြားက မိနျးမကို အသာစီးရခငျြတယျ…ထကျမွတျတဲ့ ယောကျြားက မိနျးမအပျေါ သဘောထားကွီး အလြှော့ပေးတတျတယျ…တုံးအတဲ့ ယောကျြားက မိနျးမရဲ့အားနညျးခကျြတှကေို မွငျတိုငျး စိတျပကျြလှယျတယျ။ထကျမွတျတဲ့ ယောကျြားက မိနျးမရဲ့ အရညျအခငျြးကို ရှာကွံ အသိအမှတျပွု ခြီးမှမျးတတျတယျ…တုံးအတဲ့ ယောကျြားက မိနျးမနဲ့ အခြိနျနရော မခှဲဘဲ ငွငျးခုံ ရနျဖွဈတယျ။
လူပုံအလယျမှာ မိနျးမကို မကျြနှာသာ မဲ့စေ တယျ…ထကျမွတျတဲ့ ယောကျြားကလူပုံအလယျမှာ မိနျးမကို မကျြနှာသာ ရစတေယျ…ဆုံးမ ပွောဆိုစရာရှိရငျ နှဈကိုယျကွားသာ ပွောဆိုတယျ။တုံးအတဲ့ ယောကျြားက
မိတျဆှေ အပေါငျးအသငျးတှကေ “မယားကွောကျ” လို့ ခနဲ့တာကိုမခံနိုငျဘဲ မိနျးမအပျေါနိုငျစားပွ ခငျြတယျ…ကိုယျ့ဘဝ လကျတှဲဖျောဟာကိုယျ့မိနျးမသာ ဖွဈတယျဆိုတာ သူမနေ့လေို့ ဖွဈမယျ။ထကျမွတျတဲ့ ယောကျြားကတော့ အပေါငျးအသငျးတှကေ ခနဲ့ရငျတောငျ ဂရုမစိုကျဘဲယုယမွဲ ယုယတယျ…ကိုယျ့ဘဝအတှကျ ဆိုးတူကောငျးဖကျဟာ ကိုယျ့မိနျးမဘဲလို့သူနားလညျလို့ ဖွဈတယျ။
တုံးအတဲ့ ယောကျြားကမိနျးမရဲ့အတိတျဟောငျးကို ခဏခဏ တူးဆှပွီး ပွဿနာ ရှာတယျ…ထကျမွတျတဲ့ ယောကျြားက မိနျးမနဲ့အတူ ပြျောရှငျသာယာတဲ့အနာဂတျ ဖနျတီးဖို့ပဲ ကွိုးစားတယျ…တုံးအတဲ့ ယောကျြားက
မိနျးမရဲ့အမှားကို အသေ ဆုပျကိုငျပွီး နိုငျကှကျအဖွဈ အသုံးခတြယျ…ထကျမွတျတဲ့ ယောကျြားက မိနျးမရဲ့အမှားကို ခှငျ့လှတျပွီး မတ်ေတာနဲ့ ပွုပွငျပွောငျးလဲဖို့ ကွိုးစားတယျ။တုံးအတဲ့ ယောကျြားက “နငျထှကျသှား မသှားရငျ ငါသှားမယျ” လို့ဆိုတယျ…ထကျမွတျတဲ့ ယောကျြားက”ငါတို့ ဘယျတော့မှ ဘာ
အကွောငျးနဲ့မှ မခှဲကွဘူး”လို့ ဆိုတယျ။
တုံးအတဲ့ယောကျြားကမိနျးမကို သဝနျတို ခြုပျခယျြတယျ…ထကျမွတျတဲ့ ယောကျြားက မိနျးမကို ယုံကွညျမှု ပေးပွီး ခဈြမတ်ေတာနဲ့ စိတျအေးလကျအေး ခညျြနှောငျထားတယျ။တုံးအတဲ့ ယောကျြားကကိုယျတျောကိုယျတတျကွောငျးသာ
ဦးစားပေး အလေးထားတယျ…ထကျမွတျတဲ့ ယောကျြားက မိနျးမဆီက ကိုယျ မသိသေးတာတှကေို လလေ့ာသငျယူတယျ။တုံးအတဲ့ ယောကျြားကမိနျးမ ကိုယျ့အနားက တဈဖဝါးမှ မခှာရငျ စိတျကဉျြးကပျြ မောငျးထုတျ တယျ…ထကျမွတျတဲ့ ယောကျြားက ဘုရားသှား ကြောငျးတကျ တူစုံမောငျနှံ တတှဲတှဲ သှားလာရတာကို ပီတိဖွဈတတျ ….ဂုဏျယူတတျတယျ။
တုံးအတဲ့ ယောကျြားက စီးပှားသာ ရှာပွီး မိနျးမအပျေါ ယုယကွငျနာမှု ပေးရမှာ ပငျြးတယျ အပိုအလုပျလို့ ယူဆတယျ…ထကျမွတျတဲ့ ယောကျြားက စီးပှားလဲ ရှာတယျ မိနျးမအပျေါ ယုယကွငျနာမှု ပေးတယျ။
တုံးအတဲ့ ယောကျြားကမိနျးမကို စိုးရိမျ ပူပနျမှုနဲ့ စိတျဖိစီးမှု တှပေေးတယျ…ထကျမွတျတဲ့ ယောကျြားက မိနျးမကို စိတျအားထကျသနျမှုနဲ့ ပြျောရှငျမှုကို ပေးတယျ။တုံးအတဲ့ ယောကျြားက သူ့ရဲ့ဇာတျရှုပျတှဖေောကျပွနျမှုတှနေဲ့ မိနျးမကို မကျြရညျ ကစြတေယျ…ထကျမွတျတဲ့ ယောကျြားက အောငျမွငျတဲ့ မိသားစု ဘဝကို တညျဆောကျပွီး မိနျးမကို ပွုံးရယျစတေယျ…
Credit : မူရငျးရေးသူ